Norwey oo ku baaqday in la gargaaro Qaxootiga Soomaalida ee Kenya
Golaha Qaxootiga Dalka Norway ee Norwegian Refugees Council (NRC) warbixin kasoo baxday ayaa lagu sheegay in xaalad adag oo dhinaca nolosha ah heysato Carruurtasomaliyeed ee kusugan Xeryaha Qaxootiga Kenya.
Waxa uu golahu ugu yeeray Waddamada Caalamka inay kordhiyaan caawimaad iyo taakuleyn deg deg ah loo sameeyo Carruuta Somaliyeed ee ka barakacay dagaaladii ka dhacay Somalia.
Kumanaan carruur ah iyo qoysaskooda ayaa awoodi waayey inay helaan nolol ku filan kuwaasi oo cunto laaan iyo colaado is biirsaday kaga barakacay gobollada Somalia waa sanadkii hore ee 2011 oo Abaaro ku dhufteen gobolladaas.
Warbixinta ayaa lagu yiri  Qaxootiga Somaliyeed waxay ubaahan yihiin Cunto ku filan,Biyo nadiif ah iyo meel ay gabaad ka galaan qoraxda maalinkii iyo qabowga habeenkii.
Xasan Kheyre oo madax ka Golaha Qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyo (NRC0) ayaa sheegay in Carruurta somaliyeed ee kusugan Xeryaha Dhadhaab inay ubaahan yihiin sidoo kale Waxbarasho ku filan waxaana uu beesha caalamka ka dalbaday inay il gaar ahaaneed lagu eego Carruurta iyo qoysaska somaliyeed.
Qaramada Midoobeey iyo Hayadaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala qeybo ka mid ah gobollada Somalia ayaa dhowr jeer waxa ay sheegeen inay ku howlan yihiin gar gaarida dadka somalida ee caawimaada biniaadanim ubaahan xilli deegaanada Shabaab maamulaan laga mamnuucay hayadaha samafalka inay ka howlgalaan.